कसले दियो वाइसिएल इन्चार्ज दीपशिखालाई ज्यान मार्ने धम्की ? - Everest Dainik - News from Nepal
कसले दियो वाइसिएल इन्चार्ज दीपशिखालाई ज्यान मार्ने धम्की ?
काठमाडाैं । युवा कम्युनिष्ट लिगका अध्यक्ष दीपशिखालाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको छ । साउदी अरबको एउटा नम्बरबाट बारम्बार फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको दिपशिखाले फेसबुकमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
बाट इमोमा फोन गरेर आफू रवि लामिछानेको समर्थक भएको भन्दै वाइसिएल अध्यक्ष दिपशिखालाई पटक पटक फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेको वाइसिएल महासचिव सुबोध सेर्पालीले जनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस वाइसिएलले ओली र सिके अतिवाद विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा
साउदी अरबबाट फोन गरेर दिपशिखालाई सागर हिन्दु नाम बताउने एक जना व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि वाइसिएलले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै महासचिव सेर्पालीले संगठनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै हिम्मत भए खुला स्थानमा आउन समेत चेतावनी दिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस चितवनमा वाईसीएलको नगर सम्मेलन
इमोमा रवि लामिछानेको फोटो र उनले चलाउने कार्यक्रमको फोटो राखेर धम्की आउन थालेपछि वाइसिएलले कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
दिपशिखाको स्टाटस यस्तो छः
यो +96650131833 नम्बरको इमोबाट १ जनाले मलाई बारम्बार मार्ने धम्की दिईरहेको छ । उसले आफु पत्रकार रवि लामिछानेको समर्थक भएको बताउने गरेको छ भने आफुलाई सागर हिन्दु नाम बताउने गरेको छ । कोही साथिहरुलाई यो नम्बर बारे जानकारी भए पाउँ ।
याे पनि पढ्नुस वाइसिएलसँग एकता गरी युवा सशक्तीकरणमा लाग्ने : युवासंघ
ट्याग्स: deepshikha, ycl